Wasiir Sadiiq Warfaa oo khudbad ka jeediyay shir ka socda Geneva – Hornafrik Media Network
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa khudbad ka jeediyay shir caalami ah ee looga hadlayey arrimaha daryeelka bulshada,kaas oo ay soo qaban qaabisay hey’adda shaqaalaha adduunka ee ILO, kaa oo ka socda magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Wasiir Warfaa ayaa khudbadiisa uga hadlay sida ay dowladda Soomaaliya u dooneyso in lagu gacan siiyo si dhamaan bulshada Soomaaliyeed loo gaarsiiyo barnaamijka Daryeelka bulshada.
“Iyadoo aanu taageero ka helayo bah-wadagteenna horumarinta, waxaan bilownay qaar ka mid ah mashaariicda horumarinta ee aad muhiimka u ah si aan u hirgalinno Nidaam daryeelka Bulshada oo waafaqsan Xeerka Daryeelka Bulshada ee Qaranka, marka laga hadlayno awoodena maaliyadeed, waxaan ku faraxsanahay in bishii Luulyo 2019-ka Guddiga fulinta ee hay’adda lacagta adduunku (IMF) ay kulmeen si ay u soo gabagabeeyaan la tashiga qodobka 4aad ee ku saabsan Soomaaliya. Waxay ku heshiiyeen in siyaasadaha dhaqaalaha iyo qaabdhismeedkeeda ee hoosta looga qeexay SMP afaraad ay buuxiyeen heerarka siyaasadaha ee la xiriira qorsheynta deynta sare.
” Xafiiska Ra’iisul wasaaraha (tubtiisa Horumarinta Bulshada iyo Horumarinta Dhaqaalaha) ayaa horey u muujiyay in maalgashiga waaxaha bulshada, gaar ahaan daryeelka bulshada iyo biyuhu ay heli doonaan qoondeyn miisaaniyadeed oo ballaaran ka dib deyn cafinta.” ayuu yiri wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada.
Dad ku dhintay qarax ka dhacay dalka Ciraaq.